‘अब जिन्दगी नचल्ने भयो, वैशाखदेखि पैसाको मुख देखेको छैन’
दीपक ठकुरी बुधबार, भदौ १७, २०७७
काठमाडौं- महिना महिनामा सरकारी तलब खानेलाई के थाहा, ६ महिनादेखि काम गरेर तथा काम गर्न नपाएर तलब नपाएका नागरिकहरूको पीडा । बन्द गर्‍यो, बस्यो । खै सरकारको दायित्व ?
केही दिनअघि भरतसिंह धामीले फेसबुकमा लेखेका हुन्, यी शब्द । उनको फेसबुक स्टाट्समा निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीको पीडा व्यक्त थियो, साथै सरकारप्रति व्यंग्य छेडिएको थियो ।
हिजोआज फेसबुकमा तलब नपाएको सांकेतिक स्टाट्स प्रशस्तै भेटिन्छन् । जसमध्ये निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका स्टाट्स झनै बढी छन् ।
‘स्कुलले अनलाइन कक्षा लिन लगाएको छ तर तलब दिँदैन । रासन, कोठाभाडालगायत धेरै कुरा म्यानेज गर्नै गाह्रो भयो, अब के गर्ने होला ?’
ललितपुर बस्ने एक शिक्षकले फोनमा गुनासो गर्दै भने, ‘अब जिन्दगी नचल्ने भयो । वैशाखदेखि पैसाको मुख देख्नै पाइएको छैन ।’
उनले दुई छाक खानै धौधौ भएको समेत बताए । उनले भने, ‘जगेडा पैसाले गुजारा गर्दै थिएँ, त्यो पनि सकियो । ऋण माग्न पनि कहाँ जाने ? यस्तो बेला कसले दिन्छ ऋण ?’
भक्तपुर बस्ने एक शिक्षिकाको गुनासो पनि उस्तै छ । उनले भनिन्, ‘स्कुलले अनलाइन कक्षा लिन लगाएको छ तर तलब दिँदैन । रासन, कोठाभाडालगायत धेरै कुरा म्यानेज गर्नै गाह्रो भयो, अब के गर्ने होला ?’
निजी विद्यालयका शिक्षकको अधिकारका विषयमा बोलिदिने संस्था हो, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) । इस्टुका महासचिव भोलानाथ चालिसे निजी विद्यालयले जसरी भए पनि शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब भुक्तान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘जोखिम वहन गर्ने भनेर विद्यालय खोलिएको हो । यसकारण निजी विद्यालयले ऋण गरेरै भए पनि शिक्षकलाई तलब खुवाउनैपर्छ । सरकारले सहयोग गर्ने भन्ने कुरा त सरकारको कुरा हो ।’
हामी अर्को आन्दोलन गर्दै छौँ । निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीले तलब पाउँछन् ।
उनी यस्तो संकटको बेला सञ्चालकले विद्यालयमा आबद्ध शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निर्वाह खर्च भए पनि दिनुपर्ने बताउँछन् ।
उनले केही समयअघि कवि गोष्ठी गरेर वैचारिक आन्दोलन गरेको जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘हामी अर्को आन्दोलन गर्दै छौँ । निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीले तलब पाउँछन् । सञ्चालकले हामीसँग तलब घटाउने विषयमा बार्गेनिङ गर्न सक्छन् । हामीले रस्साकस्सी गरे सानातिना सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । सांगठिनिक क्षमता प्रयोग गरेर निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई ढिलोचाँडो तलब खुवाउने वातावरण बनाउँछौँ ।’
त्यस्तै, नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकले समेत तलब नपाएको जानकारी दिए ।
सुवेदीले शिक्षक–कर्मचारीको तलब भुक्तानीका विषय आवश्यक व्यवस्थापनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्म पहल गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘शिक्षक भनेको पेसाकर्मी हो । पेसाकर्मीले यस्तो संकटको बेला तलब पाउनैपर्छ ।’
एक प्रधानाध्यापकले चैतको तलब भुक्तान गरिएको र वैशाखदेखि तलब भुक्तान गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो आयस्रोतको मुख नै टालिएको छ । अभिभावकसँग शुल्क उठाउन दिइएको छैन । हामीसँग भएको जगेडा रकमबाट वैशाखको आधा तलब खुवाउने तयारी गर्दै छौं । जेठदेखिको तलब खुवाउन सक्ने अवस्था छैन ।’
निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले भने, ‘शुल्क लिन नपाइएकाले कोष अभाव हुँदा शिक्षक कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गर्न नसकिएको हो ।’
पुरीले निजी विद्यालयलाई चैत महिनाको तलब भुक्तान गर्न निर्देशन दिइएको र सोहीअनुसार अधिकांश विद्यालयले तलब भुक्तान गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘त्यसपछि मानवीयताका आधारमा शिक्षक र कर्मचारी बाँच्ने हिसाबले तलब दिनुपर्छ भने र हामीले भनेका छौँ ।’
‘शिक्षक–कर्मचारीको तलब भुक्तानीका विषयमा अहिलेसम्म ठोस निकास निस्किएको छैन ।’
उनले तलब भुक्तानका विषयमा सहजीकरण गर्न प्याब्सन, एनप्याब्सन, अभिभावक संघ र इस्टु सम्मिलित कार्यदल बनेको बताए । उनका अनुसार कार्यदलले काम गर्दै छ ।
उनले कम्पनीको नाममा सञ्चालित विद्यालयले सरकारबाट ऋणमा केही सुविधा पाउने व्यवस्था भएको र व्यक्तिगत रूपमा ऋण लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्नहरूलाई यतिखेर निकै गाह्रो भएको बताए । उनले भने, ‘शिक्षक–कर्मचारीको तलब भुक्तानीका विषयमा अहिलेसम्म ठोस निकास निस्किएको छैन ।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १७, २०७७ २२:५५